Qiimo aad u sarreeya oo loogu talagalay Logitech G PRO X Makiinadaha Wired ee leh VO! CE Microphone | Waxaan ka imid mac
Qiimo aad u sarreeya oo loogu talagalay Logitech G PRO X taleefoonnada gacanta ee leh Wireless Blue VO! CE
Mid ka mid ah taleefoonnada dhagaha ugu fiican ee “ciyaartooyda” aadka loo dalbado ayaa ah Logitech G PRO X oo hadda waxay leedahay qiimo dhimis weyn oo caan ah Websaytka wax iibsiga ee internetka ee Amazon. Taleefan -gacmeedyadan ayaa hadda ku jira qiimaha ugu hooseeya taariikhdeeda.
Muddo ka hor waan awoodnay iskuday taleefoon -gacmeedyadaan aniga waxaan ka imid Mac runtiina waxay tahay inaan xaqiijin karno inay runtii tahay dhegeysiga cajiib u ah tayada codkooda, sidoo kale tayada wax soo saarkooda iyo agabkooda.
Logitech G PRO X sameecadaha dhagaha, codka arxan darada ah iyo tayada codka ee ciyaartooyda
Waxaan fahansanahay in dalabku uu la mid noqon doono dhammaan kuwa ay bixiyaan websaydhkan wax iibsiga, waqti xaddidan, sidaa darteed haddii aad ka mid tahay kuwa raadinayay sameecadaha dhagaha si ay u ciyaaraan ama si toos ah u leh tayo sare oo cod leh, tani waxay kuu noqon kartaa iibsi wanaagsan.
Logitech G PRO X wuxuu ku daraa 7.1 dhawaaq ku wareegsan si aan u dhihi karno waxaan wajahaynaa tayada maqalka ee arxan darada ah. Haddii aan xoogga saarno ciyaaraha si cajiiba oo cad oo sax ah oo maqal ahwaad ku mahadsantahay qayb ka mid ah naqshadeyntaada mesh hybrid gaar ah. Waxay sidoo kale ku darayaan tikniyoolajiyadda makarafoonka Blue VO! CE oo leh miirayaasha makarafoonka laga saari karo tayada xirfadeed si kor loogu qaado codkaaga waqtiga dhabta ah.
Tani waa dalab muhiim ah iyo sida aan kor ku sheegnay waligeed hore looguma arag dhegaha dhagaha ee fiilooyinka leh ee Logitech. Waxaad badbaadin kartaa in ka badan 60 euro hadda waana taas Qiimaheeda caadiga ah waa 135 euro maantana waxaad ku heli kartaa 71,99 euro. Waxa kale oo jira nooc bilaa wireless ah oo ah moodelkan dhagaha -dhegaha, laakiin kiiskan iib ma aha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Qiimo aad u sarreeya oo loogu talagalay Logitech G PRO X taleefoonnada gacanta ee leh Wireless Blue VO! CE
Qalab cusub oo loogu talagalay Apple AirTag ayaa hadda la heli karaa
Jiilka saddexaad AirPods ayaa bilaabi kara Sebtember 30